Faranjiifi Waaqni nama of gargaaree gargaaruu jedhu Dr Mararaa Gudinaa Oromia Shall be Free |
bilisummaa May 22, 2014	Comments Off on Faranjiifi Waaqni nama of gargaaree gargaaruu jedhu Dr Mararaa Gudinaa
Gaafiifi deebii Raadiyoo Hello Oromia waliin godhan keessatti, Dr Marara Gudinaa Faranjiifi Waaqni nama of gargaaree gargaaruu jedhanii dhaaman. Yoo Oromoon akka sabaatti wal gargaaree, nu gargaaraanii.
Oromoon yoomiyyuu caalaa tokkummaan akka dhaabbatuu yaamicha dhiheessan. Oromoonni akka sabatti waan Mootummaan Itoophiyaa miidhaa hiruuf, akka sabaatti dhaabbachuu qabu. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo hundi walitti dhufuun qaawaa siyaasaa jiru akka cufaan yaamichaas dhiheessaniiru. Oromoon laga cehuuf akka siyaasatti odoo hin taanee akka sabatti cehaa jedhu. Yoo Oromiyaa jiraachuu qabdi jenne amannee, akka sabaatti jiraachuu qabnaa jedhu. Oromoon walii iyyadhaa iyya dabarsaa jedha. Hiriirri nagayaa Goondariifi Walloo keessatti deemaa jira. Garuu kan mootummaan garaa jabeennaan miidhaa jiru, uummata Oromoo kan hiriiraa bahuuf carraaquudha. Mootummaan Oromootaafi marartii hin qabu. Gaafa tokko galaaanni Oromoo nurraan dhangalaaa nu balleessaa jedhe sodaataa jedhu.
Sochii Oromoon biyya alaatti godha jiranillee dinqisiifatanii jiru. Haa ta’u malee hiriibaa bahuun waan tokko, gurmaa’uun waan biraati jedhe dubbate. Akka sochiileen kun firii horattu, Oromoon biyya alaa jiranii, akkuma ka biyya keessaa, jaarmayaa cimaa barbaaduu jedhanii. Dhaabni keessanii sochii kana gargaaruuf maali godhaa jira? Dhaabni keessanii humna hagam ga’uu qaba? Diaspora-n maal godhu qaba? Gargaarsa akkam barbaadduu? Gaafii hedduu gaafannee, deebii argachuuf
gaafiif deebisaa kana caqasuuf as tuqaa
Tags Mararaa guddinaa
Previous Raayyaa Abbaa Maccaa: Misooma Misoomaa essaatu misoomaa, biyyoon numa soomaa
Next “በኦሮሚያ ለተቃውሞ የወጡ ሠላማዊ ሰዎች ሲገደሉ ይህ የመጀመሪያ አይደለም” ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ